Mombamomba ny orinasa | Shijiazhuang Yungong Machines Technology Co., Ltd.
Fixtures amin'ny fantson-drano
Fitaovana masinina sakafo
Fanariana milina fitrandrahana harena ankibon'ny tany
Fanariana fitaovana fitsaboana
Ny firaketana ny fampirantiana
Shijiazhuang Yungong Machines Technology Co., Ltd.
Any amin'ny faritry ny fampandrosoana ara-toekarena any Xingtang County, Shijiazhuang City, misy velaran-tany 40000 metatra toradroa sy mpiasa 300 mahery. Orinasa teknolojia mampiditra R&D, endrika, famokarana, varotra ary serivisy teknika.
Ny orinasa dia miompana amin'ny famolavolana marina sy ny famokarana masinina sakafo. Ny fizotry ny famatsiam-bola dia ny silicon sol, miaraka amina fivoahana manodidina ny 3000 taonina isan-taona. Ny fitaovana dia misy karazana vy tsy misy fangarony, vy vita amin'ny karbaona, vy kely ambany ary firaka manokana hafa ary vy tsy misy fangarony duplex. Ny vokatra dia ampiharina betsaka amin'ny valves pumps impellers fittings pipe, ampahany amin'ny fiara, milina sakafo, kojakoja misy milina mineraly, vokatra fitaovana enti-mandeha ary haingon-by.
Ny vokatra azo antoka amin'ny fampiasam-bola dia fantatra amin'ny kalitao tsara sy ny fiankinan-doha amin'ny fampiharana tadiavin'izy ireo. Ny fizotrantsika dia afaka mamorona singa sarotra sy lamina mora foana.
Ny tombana amin'ny fampiasam-bola mazava dia manana tombony maro, anisan'izany ny: Famokarana singa amin'ny antsipiriany tsara / Fampihenana ny vidin'ny famokarana / Machining sy fivoriambe fepetra / Ny fampiasana alloys marobe.
Ireo vokatra dia aondrana any Eropa, Amerika ary ireo firenena any ambony.
Ny orinasanay dia manana ny zavamaniry manara-penitra maoderina, miaraka amin'ny hery ara-teknika matanjaka, ny haitao mahafinaritra, ny fanodinana famolavolana ary ny fitaovana fitiliana. Nandritra ny taona maro niainany ny varotra fanondranana, hanomezana anao serivisy aorian'ny fivarotana tonga lafatra, mandritra izany fotoana izany dia manolora vokatra ho an'ny mpanjifa voalohany.
Afaka manolotra safidy lehibe na kely isika (avy amin'ny 5g ka hatramin'ny 30kg isaky ny tapa) sy ny safidy casting sarotra. Ny ekipanay matihanina dia mamokatra fahaiza-manao miampy fiantohana mba hahazoana antoka fa mifanaraka amin'ny zavatra antenainao foana ny vahaolana amin'ny fametrahana azy tsara.
Fa maninona no misafidy antsika?
• Ekipa matihanina manampy anao amin'ny fanatsarana ny vahaolana manontolo amin'ny famolavolana ny vokatra, ny fanariana, ny milina ka hatramin'ny fitsaboana ny hafanana, ny fitsaboana eny ambonin'ny tany, sns. Mba hampihena ny vidinao.
• Fijerena toerana isaky ny fizotrany, ary fizahana farany 100%.
• Ataovy lohalaharana ny fandefasana ho an'ny mpanjifa vahiny.
• Serivisy amin'ny serivisy anglisy sy serivisy amin'ny seranam-piaramanidina.
Toe-tsaina: manantena zavatra tsara
Kalitao: Manome voninahitra
Marina: Tombontsoa ifanomezana
Fanavaozana: fanahin'ny orinasa